Shilalekha » ठूला दलका ठूला नेतालाई हराएर धरानको मेयर बनेका एक आममान्छे-हर्क साम्पाङ ठूला दलका ठूला नेतालाई हराएर धरानको मेयर बनेका एक आममान्छे-हर्क साम्पाङ – Shilalekha
कम्युनिस्टको गढ धरानमा स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ कसरी उदाए ?
९ जेष्ठ २०७९, सोमबार १४:३५
काठमाडौं । तपाईंको घर त भयो ! परिवार पनि भयो। तर, यो धरान कसको हो ? यो देश कसको हो ? यो नेपाल कसको हो ?
यो भारतले बनाउने हो? चीनले बनाउने होरु कसले बनउने नेपाल ? कसले जगाउने नेपाल ? तपाईं हामी मिलेर बनाउने हो।’
हर्क साम्पाङले चुनावअघि टेम्पोछेउ उभिएर गरेको भाषणको अंश हो यो। उनले ठूला मञ्च बनाएर भाषण गरेनन्। संभवै नहुने सपना देखाएनन्। समस्या र विकृति देखाए अनि आफूले समाधान गर्न सक्ने उपाय सुनाए।
यही वाचा उनलाई चुनाव जित्न पर्याप्त भयो। किनभने धराने जनता दलहरूको ‘झूटो आश्वासन’बाट हैरान भइसकेका थिए। उनको जित किन पनि महत्त्वपूर्ण भयो भने, उनले सत्ता गठबन्धन र धरानमा परम्परागत रूपमा बलियो मानिएको एमालेका ‘हेभिवेट’ उम्मेदवारलाई पराजित गरेका हुन्। साम्पाङले २० हजार ८२१ मत पाउँदा उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका किशोर राईले १६ हजार ५९ र एमालेकी मञ्जु भण्डारीले १२ हजार ८२५ मत पाएका छन्।
हर्क साम्पाङ धरानबाहिरका नागरिकका लागि नयाँ नाम हुनसक्छ, तर धरानेहरूका लागि नयाँ होइनन्। उनी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानदेखि सामाजिक विकृतिविरुद्ध हाते माइक बोकेर सडकमा आवाज घन्काउँदै हिँडेको धेरै भयो।
उनी यसपटक मात्र होइन, २०७७ सालको उपनिर्वाचनमा पनि धरानको मेयरमा उम्मेदवार बनेका थिए। तर, उनले सफलता पाउन सकेनन्। वास्तवमा उनको जमानत पनि जोगिएन। त्यति बेला साम्पाङले जम्मा ५४० मत पाएका थिए।
चुनावमा पराजय भए पनि उनको अभियान रोकिएन। उनी विकृति र विसंगतिविरुद्ध लडिरहे। अनि, ती विकृति र विसंगति रोक्न आफैं मेयर हुनुपर्छ भन्ने भावना झनै दरिलो भयो। र, फेरि उनी मेयरको उम्मेदवार भए।
साम्पाङले धरानको माटोलाई ‘ढोगेर’ चुनावी अभियान सुरु गरे। उनी टेम्पोमा एक्लै हिँड्थे। हरेक चोक र टोलमा रोकिन्थे। टेम्पोबाहिर उभिएर आफ्ना कुरा राख्थे। उनका भाषणमा धरानमा भइरहेका विकृतिका विषय हुन्थे। समस्या बताउँथे र समाधानको उपाय पनि भन्थे। चुनाव नजिकिँदै जाँदा उनलाई साथ दिने जनताको समूह पनि बढ्दै गयो।
साम्पाङले राजनीतिक पार्टीको उम्मेदवारजस्तो प्रचारमा अध्यधिक खर्च गरेनन्। उनी सामान्य आर्थिक अवस्था भएको परिवारका सदस्य हुन्। परिवार पाल्न संघर्ष गरेका छन्। त्यस क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा पनि पुगे। त्यही भुईंमान्छे अहिले धरानको मेयर भएको छ, त्यो पनि कुनै दलको फेर नसमाती नै!
धरानेका दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका सवाल उठाएर साम्पाङले ‘क्रान्ति’ थालेको १० वर्षअघि हो। धरान सहरको दायाँबायाँ बग्छन् सर्दु र सेउती खोला। उपमहानगर बनेपछि सर्दुपारिको विष्णुपादुका र सेउतीपारिको विजयपुर पनि धरानमै मिसिएका छन्।
‘जनतालाई मर्का पर्ने कुरामा उहाँ सधैं विरोधमा ओर्लिनुहुन्छ, त्यसका लागि एक्लै लड्नु किन नपरोस्,’ साम्पाङलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका समिर तामाङ भन्छन्, ‘जनताकै आवाज उठाउँदा उहाँलाई पटक(पटक प्रहरीले थुनेको छ। कुटेको छ। तर डराउने र थाक्ने स्वभाव उहाँको छैन।’
आन्दोलनको भाषा बोलिरहेका साम्पाङलाई साढे दुई वर्षअघि लाग्यो( सधैं सडकमा बसेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। समाधान गर्ने ठाउँमा आफैं पुग्नुपर्छ।
‘दलका मान्छेको नजरमा उहाँ खुस्केकै हो नि,’ धरान-९ का ४६ वर्षीय राजेश शर्मा भन्छन्, ‘उहाँ हरेक क्षण जनताकै समस्याका लागि दस वर्षदेखि लागेको लाग्यै हुनुहुन्छ। पार्टीका मान्छे चुनाव आउँदा मात्रै जनता सम्झिन्छन्। उहाँ दिनरात जनताको घरदैलोमा पुग्नुहुन्छ। यस्तो मान्छे देखेपछि दलहरूले खुस्केको भन्नु कुन नौलो हो र ? तर यसपटक उहाँ र धराने जनता मिलेर दलहरूको हावा खुस्काइदिएको चाहिँ हो।’
अन्ततः सबैलाई सरप्राइज दिँदै चुनाव जितेका साम्पाङ अब प्रश्न सोधिरहने भूमिकाबाट उत्तर दिइराख्नुपर्ने आसनमा पुगेका छन्। नागरिकको सूचनाको हकका लागि समेत निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका उनी अब कसरी अघि बढ्छन्रु यो विषयलाई धरानमा धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।